﻿	Ntụziaka Salad Egg kacha mma - Ezi Ntụziaka
mac na chiiz jiri ofe chiiz
ude mmiri ara ehi cupcakes na vanilla wafers
-esi mee jello mkpụrụ salad
anụ ezi ejiri anụ ezi anụ ezi
Ntụziaka Salad Egg kacha mma
Na Ntụziaka Salad Egg kacha mma bụ ihe dị mfe mmasị! Onweghị ihe dị ka picnic zuru oke karịa nsen sie sie agwakọta na Mayo na a tuo nke mọstad na n'ezie crunchy na celery na-acha akwụkwọ ndụ eyịm!
Ma ị na-eme sandwich salad ma ọ bụ salad dị mma site na iji letus ma ọ bụ obere carb wraps, ọ dịghị ihe na-ekwu 'American niile' dị ka na akwa salad!
Ogologo oge ka o sie nsen maka akwa akwa
M na-eji usoro a maka zuru okè ike sie nsen oge ọ bụla. Ha na eji obi ọcha esiri esi na odo odo (na-enweghị isi awọ) pụta.
M na-ewetara ha obụpde wee wepu ya na ọkụ wee hapụ ịnọdụ ala maka oge 15-17 (akwa buru ibu). Gbaa ọsọ n'okpuru mmiri oyi ma kpochaa onye iji jide n'aka na ọ zuru oke.
Otu esi eme akwa eghe
Ndi akwa gi ohuru? Ntụziaka salad kachasị mma na-amalite site na nnukwu ihe. Ọhụrụ nsen ga-esi nri nke ọma ma na-enwu gbaa. Akwa ọhụrụ ga-edina n'akụkụ ya na ala nke nnukwu efere mmiri, ọ bụrụ na ha etoola, ha ka ga-emikpu, ma nọrọ n'otu isi. Erila akwa ma ọ bụrụ na ha see n’elu mmiri, nke a pụtara na ha agafeela.
Jide n'aka na ị ga-egbutu yabasị na celery nke ọma ka iberibe ahụ dị obere karịa iberibe akwa!
Iji mee Sandwiches Salad Egg
Ghichaa yolks ahụ na Mayonezi ruo mgbe ị ga-eji ire ụtọ kpamkpam wee pịa ya na ndị ọcha. Nke a na-eme ka nke kacha mma egg salad, ọ na-apụta otú creamy!
M na-eji ihe akwa akwa iri ndị ọcha na-etinye ọcha na slicer, bee wee gbanwee akwa na ịtụkwasị ya ọzọ. Mee mgbutu ọsịsọ! M na-eji akwa egg m maka ihe ndị ọzọ dịka strawberries, kiwi na ọ kachasị mma maka ịkpụ ero iji mee ọkụkọ marsala .
Nri ehihie zuru oke
Obụpde, dị jụụ ma belata akwa. Bee na ọkara, wepụ yolks na iri ọcha.
Mash akwa yolks na Mayonezi, mọstad na nnu na ose nụrụ ụtọ.
Thegbakwunye chopped akwa ọcha na-acha akwụkwọ ndụ yabasị, celery, na chopped ọhụrụ dil. Gwakọta nke ọma ma jee ozi oyi na achịcha, salad, ma ọ bụ ihe mkpuchi!
Maka ihe ọhụrụ, gbalịa ịme akwa bekee bekee na ube bekee! Super ike na-na American kpochapụwo!
Ogologo oge ole ka salad egg?
Na-ekwu ma ọ bụrụ na e nwere nke fọdụrụ afọdụ? Ọ dị ezigbo mfe ịkọ mgbe akwa akwa dị njikere ịkwatu. Ọ ga-enweta mmiri ma tufue agba ya na-enwu gbaa! Mana ohere dị, nhazi salad a ga-adịte aka n’ụlọ gị!
Shrimp Salad - ukwu na croissants
Ntụziaka Salad Kacha Mma (Mfe) - ya mere na-atọ ụtọ
Kacha mma Salad Chicken - sandwiches kacha mma!
Ham Salad - Akwa maka fọdụụrụ!
Waldorf Salad - Ọhụrụ na crunchy!
Omuma Tuna Salad - Mfe uzommeputa dị ukwuu karịrị letus ma ọ bụ na achịcha!
4.97site naUgboko 157votu NyochaNtụziaka
Oge Nkwadebe10 Nkeji Oge nri10 Nkeji Oge zuru ezuiri abụọ Nkeji Ọrụ4 servings Onye edemedeHolly Nilsson Onweghị ihe dị ka picnic zuru oke karịa ude mmiri salad ude! Bipute Ntụtụ
▢8 akwa sie sie ma sie ike
▢1 ½ teaspoons odo odo
▢1 yabasị akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ mẹ iphemiphe ọbule
▢1 ọgịrịga celery finely gburu
▢abụọ teaspoons ohuru ohuru gbanwere
Bee nsen na ọkara. Wepu yolks na iri ọcha.
Mash yolks na Mayonezi, mọstad na nnu & ose nụrụ ụtọ ruo mgbe ire ụtọ na creamy.
Tinye ihe ndị ọzọ fọdụrụnụ ma bido nke ọma.
Na-eje ozi na achịcha ma ọ bụ na letus.
Calorisị:320,Carbohydrates:1g,Protein:iri na otug,Abụba:29g,Abụba Ajuju:6g,Cholesterol:339mg,Sodium:332mg,Potassium:Ogbe 147mg,Sugar:1g,Vitamin A:570IU,Vitamin C:0.9mg,Calcium:53mg,Iron:1.6mg
Isiokwuakwa salad N'ezieNri ehihie, Salad Esie yaOnye AmericaEnd SpendWithPennies.com. Ọdịnaya na foto bụ ihe nwebisiinka. Kekọrịta nke uzommeputa a gbara ume ma nwee ekele. A machibidoro ibipụta na / ma ọ bụ ịzigharị usoro nri zuru oke na mgbasa ozi ọhaneze. Biko lee iwu ojiji iji foto m ebe a .